तिथि मेरो पत्रु » यो उलट आना मा – अनलाइन डेटिङ जान पनि सही हो?
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: अगस्ट. 02 2020 | < 1
तपाईं हाल एक टुक्रिन माध्यम गएका छन् भने, अनलाइन डेटिङ पलटाव गर्ने सही तरिका हो? एक सम्बन्ध कहिलेकाहीं सजिलो छैन पछि डेटिङ संसारमा बाहिर शुरू. यो उलट आना मा हुनु कठिन छ, तर यी सुझाव यहाँ हो सुरक्षित राखन गर्न!
म आफ्नो अतीत सम्बन्ध सबै बाहिर फेंक भन्दै होइन, तर आफ्नो अनलाइन थप आफ्नो सम्बन्ध पछिल्लो प्रोफाइल. मान्छे तपाईं सम्बन्ध विच्छेद छन् भने जान्न चाहन्छु, अलग, विधवा आदि. तात्पर्य, "म अनलाइन डेटिङ संसारमा नयाँ हुँ" तपाईं यसलाई नयाँ हुँदा प्रयोग गर्न ठीक छ. हरेक एक समय मा नयाँ थियो!
ओफलाइन दुनिया जस्तै, अनलाइन डेटिङ संसारमा Cheaters को पूर्ण छ, फटाहा, आदि. तपाईं प्रोफाइल मा देख र सन्देशहरू स्वीकारिरहेका छन् जब होसियार हुनुहोस्. बाहिर शुरू र उलट आना मा जा तपाईं ध्यान दिनेछ गर्ने हरेक व्यक्ति कमजोर बन्ने नेतृत्व गर्न सक्छन्. तपाईं होसियार भएनौं भने यो समस्या निम्त्याउन सक्छ.
सबै आफ्नो जानकारी दिन नगर्नुहोस्
अनलाइन डेटिङ सेवाहरू लुकेको कुरा धेरै कारण त्यहाँ राख्न छ. एक व्यक्ति मा भवन भरोसा समय लाग्छ. तपाईं पछि पछुताउनु सक्छ किनभने तिनीहरूले आफ्नो फोन नम्बर थाहा अघि कसैले चिन्न समय लिनुहोस्.
एक मित्र क्षमता भन्दा हेर छ
तपाईं कुनै मा साँच्चै चासो हो भने, र उलट आना मा, तपाईं गर्दै छन् रुचि राम्रो छ भने एक असल मित्र संग जाँच. तपाईं ठूलो गल्ती अघि मित्र बोल्दा एकदमै इमान्दार हुन सक्छ.
7 पत्रु प्रेमी बारे सत्य
कसले के तपाईं प्रेमको छिटो गर्न सक्दैन भन्छन्?